လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကို ပုံဖော်လိုက်သော ရှုပ်ထွေးပွေလီမှုများနှင့် ပြည့်နှက်နေသည့် သမိုင်းအကျဉ်း(ပထမပိုင်း)
ဧဝရတ်မှသည် တောင်တက်အားကစား ဖွံ့ဖြိုးရေးဆီသို့
တောင်တက်သမားများ၏ အမြင့်ဆုံးနှင့် နောက်ဆုံးအိပ်မက်မှာ ဧဝရတ်တောင်ထိပ်ပေါ် ရောက်ရှိရေးဖြစ်ကြောင်း တောင်တက်သမားများအကြား ဆိုရိုးစကား ရှိခဲ့သော်လည်း မြန်မာတောင်တက်သမားများအတွက်မူ ဧဝရတ်တောင်ထိပ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့မှုက သူတို့ အိပ်မက်၏ အစပင်ရှိသေးသည် ထွန်းခိုင် ရေးသားသည်။ ရေခဲများဖုံးလွှမ်းနေပြီး ၉၀ ဒီဂရီနီးပါး မတ်စောက်သည့် ကျောက်တောင်ပေါ်တွင် တွဲလဲခိုတက်နေရင်း ကိုဝင်းကိုကိုတယောက် ခေတ္တမျှ အမောဖြေနေခဲ့သည်။.
ဆင်းရဲမွဲတေမှုနှင့် စစ်ဘေးဒဏ်များမှ လွတ်မြောက်ရန် ပြည်ပသို့ ထွက်ခွာသွားကြသော မြန်မာနိုင်ငံသား သိန်းပေါင်းများစွာအား ပြည်တွင်းသို့ ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဇွန် ၂၄ ရက်နေ့က ပြောကြားလိုက်သည်
ဦးစခုန်တိန့်ယိန်းကို အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ်အဖြစ်မှ ရုပ်သိမ်း
ကချင်အထူးဒေသ(၁) ခေါင်းဆောင် ဦးစခုန်တိန့်ယိန်းကို အမျိုးသားလွှတ်တော်အမတ် အဖြစ်ကနေ ရုပ်သိမ်းဖို့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲခုံအဖွဲ့က ဒီနေ့ အမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်
ဝေါတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် အချင်းများမှုမှာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြဿနာမှ စတင်ခဲ့
အချင်းများမှုကြောင့် အဒူရာရှစ်ဆိုသူ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တဦး ဦးခေါင်းပေါက်ကွဲ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး အဒူရာရှစ်ပိုင်ဆိုင်သည့် အအောက်အဦးတလုံး၊ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများ ရောင်းချသည့်၎င်း၏ဆိုင်နှင့် ဗလီတလုံးတို့ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေးတစ်ခုခု လုပ်ကိုင်ဖို့၊ ဒါမှမဟုတ် အလုပ်လုပ်ဖို့ နေထိုင်နေကြတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေကြားမှာ မြန်မာစာနဲ့ ဘာသာစကားကို စိတ်ဝင်တစား လေ့လာသင်ယူလာကြတာကို တွေ့ရပါတယ် သီရိဟန် ရေးသားသည်။ ဓာတ်ပုံများ- မာရို ဗာလီ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အတူ နိုင်ငံသူ၊ နိုင်ငံသားတွေ မျှော်လင့်နေတဲ့ အစိုးရတစ်ရပ် ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုကို ရရှိနေတာလည်း ရက်ပေါင်း ၅၀ ကျော်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို စိတ်ဝင်စားစရာ.
မေးခွန်းထုတ်ခံနေရတဲ့ လွှတ်တော်များရဲ့ အပြန်အလှန် ထိန်းညှိနိုင်စွမ်း
ဝေဖန်သူတွေကတော့ ပြည်ခိုင်ဖြိုး လွှမ်းမိုးတဲ့ ပြီးခဲ့တဲ့လွှတ်တော်နဲ့ အစိုးရ လက်ထက်တုန်းက Check and Balance အခြေအနေလိုမျိုး အနိမ့်ဆုံးအားဖြင့် ရှိနေမှ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွေ ပိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိမယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ် ဉာဏ်လှိုင်လင်း ရေးသားသည်။ ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော် အနိုင်ရထားတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD)က.
အမြန်လမ်းဘေးတွင် ခြံစည်းရိုးခတ်ရန် ပြင်ဆင်နေမှုကို ကျေးရွာသားအချို့ ကန့်ကွက်
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး၊ မိုင်တိုင် ၁၉၂ ရှိ ရဘိန်းကျေးရွာအနီး ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လမ်းနယ်နမိတ်နှင့် ကျေးရွာများအကြား ခြံစည်းရိုးခတ်ရန် ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ပြင်ဆင်နေမှုကို ဒေသခံအချို့က ကန့်ကွက်နေကြသည်။